16 Desserts mora ho an'ny vahoaka - Sakafo
Gynaec Dia Singam-Bolo Hoditra Lamaody Mpanambady Fitness Levitra Drafitra Sy Torohevitra Mpinamana Sy Fianakaviana Anontanio The Expert Lakozia Maharitra
Desserts mora 16 ho an'ny vahoaka (Satria manana olona an-tapitrisany ianao amin'ity faran'ny herinandro ity)
Tsara kokoa ny tsindrin-tsindrin-tsakafo rehefa mizara azy ireo, marina? Ny fandrahoan-tsakafo ho an'ny vondrona dia mety mampatahotra, fa miaraka amin'ny fomba fahandro mamy natao hamelomana ny vahoaka dia tsy mila tototry ny sakafo tsindrin-tsakafo ianao. Ireto mofomamy, mofomamy, mofomamy, crisps mora ary maro hafa ireto dia mampihena ny fihenjanana amin'ny fanaterana tsindrin-tsakafo ho an'ny ekipanao ary mendrika tanteraka ny valiny mamy (sy fiderana).
Mifandray : Ahoana ny fanipazana antoko-sakafom-pisakafoanana tsy mahandro manontolo, manomboka amin'ny zava-pisotro mankany amin'ny tsindrin-tsakafo
Sary: Liz Andrew / Styling: Erin McDowell
1. Mofomamy tsotra Cherry Skillet
Tsy matsiro ihany ny mofomamy, fa tsy dia mahafinaritra ihany koa. Ampiasao miaraka amin'ny gilasy frantsay gilasy frantsay sy saosy karamela ny sombin-tsakafo tsirairay ho an'ny fitsaboana mihasimba.
Raiso ny recette
2. Ombré Citrus Upside-Down Cake
Raha afaka manapaka voasary ianao dia afaka manamboatra mofomamy mahavariana ity. (Fanampin'izany, feno vitamina C izy, ka salady voankazo azo atao, sa tsy izany?)
3. Cake Cake
Mora mamitaka ity mofomamy mahafinaritra ity. Afangaro fotsiny ny fonosana mofomamy misy boaty roa ary araho ny torolalana tsotra handrahoana lamina fisavana.
4. Ginam Roll
Ny hany zavatra tsara kokoa noho ny horonan-kanelina vao namboarina? ny goavam-be horonan-kanelina vao namboarina. Ny koba pizza dia miorina amin'ny fototra ho an'ny mpanentana haingana sy mora mamela ny tranonao maimbo amin'ny ambaratonga manaraka.
5. Fihinam-bary masaka-loham-pisakafoanana miadana
Ity tsindrin-tsakafo decadent ity dia mahandro ny tenany ary manompo olona valo. Mafana be ny pudding, amin'ny maripana na mangatsiatsiaka ary maharitra dimy andro ao anaty vata fampangatsiahana.
Henry Hargreaves / Avocaderia
Raha mahay mampiasa blender ianao dia azonao atao ny mipaoka an'io tsindrin-tsakafo sôkôla tsara kalitao am-pisakafoanana io. (Fanamarihana: ity fomba fahandro ity dia mahasoa efatra, koa avo roa heny na avo telo heny ho an'ny vahoaka.)
7. Perfect Instant Pot New York Cheesecake
Ny cheesecake tsara tarehy dia tsara ho an'ny tranga rehetra, ary raha ny marina, ny vondron'olona dia tsara indrindra ho an'ity tsindrin-tsakafo mora raisina ity, satria mampidi-doza ny ambiny.
8. Cookie Chip Chocolate ao anaty lovia miaraka amin'ny Caramel sy sira ao anaty ranomasina
Tadidinao ireo mofomamy mofomamy mahavariana izay andidian'ny fianakavianao isan-taona amin'ny andro nahaterahanao? Eny, izao dia mety ho fitsingerenan'ny andro nahaterahanao isaky ny andro ratsy amin'ny taona.
9. Fitsaboana Krispie Vary dibera Brown
Hafiriana no lasa hatramin'ny nanaovanao Rice Krispie fitsaboana an-trano? Mety ho ela loatra. Andao hanova izany, sa tsy izany?
10. Brownies ambony crinkle
Ny fiarahan'ny vondrona rehetra dia tsara kokoa miaraka amin'ny lovia volontany, indrindra rehefa vita an-trano izy ireo. Atsofohy amin'ny siramamy anabolika azy ireo alohan'ny vonona ny handavaka azy ireo.
taovolo tsotra tsara indrindra ho an'ny volo salantsalany
Gimme lafaoro sasany
11. Ny Apple Crisp tsara indrindra
20 minitra fotsiny vao hikapohana crisp an'ny paoma iray, ary hihinana azy haingana kokoa ny ekipanao. Asio gilasy, gilasy nokapohina na fromazy manga potipotika (!!) amin'ny vonon-kiady ambony.
12. Fudge Freezer an'ny Voanjo Chocolate
Hanasa ny namanao ianao mba hialana tsiny fotsiny mba hanaovana andiany lehibe amin'ity fety vegan tena mora entina efatra ity.
Bilaogin'ny sakafo aho
13. Cheesecake Basque may 5-enina
Ity cheesecake tsy misy crust ity, hita any amin'ny Basque Country any Espana, dia be pitsiny sy eoropeanina, nefa koa mora azo.
14. Blondy sôkôla vita amin'ny sôkôla vita amin'ny sira ny volontsôkôlà
Masira, mamy, gooey ary vonona ny hihinana amin'ny tananao, tsy mila misy tsindrin-tsakafo hafa aorian'ny ataonao andiany lehibe amin'ireo bara ireo.
Ity Silly Girl's Kitchen ity
15. Cobbler Chocolate Pecan
Ny bika aman'endriny dia tsy ny ampahany manandanja indrindra amin'ity mpanao sôkôla mihasimba ity, izay mety indrindra amin'ny mpanao mofo vaovao. Ataovy mafana izy ary ny club club anao dia hangataka ny fomba fahandro (sy fanasana miverimberina).
16. Chocolate Cherry ‘Krimety mahafinaritra’
Yay, tsindrin-tsakafo mangatsiaka izay paleo, vegan SY adala matsiro. Ny resipeo dia manompo roa, noho izany alaivo kely fotsiny mba handraisana ny olonao (miampy ambin'isa), izay hotononin'ireo mpisolo ranomandry mahasalama anao.
Mifandraika: Desserts fahaizana mora 12, satria tianao ny manendasa fa manadio
Sokajy Fampihenan-Danja Haingo Fahalalana & Fanabeazana
horonantsary momba ny tantaram-pitiavana ambony
ny fomba fanakanana ny volo hianjera eo noho eo
fanatanjahan-tena mba hahazo asa fanaintainana
fomba fahandro akoho mora ho an'ny ankizy